Home / Foset Guide / Kacha mma foset na-eduzi
2020 / 11 / 16 nhazi ọkwaFoset Guide 4123 0
Tinye style & ọrụ na a ọhụrụ kichin foset. Otu n'ime ihe ndị kasị bara uru kichin fixtures nwekwara okpukpu abụọ dị ka ndị zuru ezu ngwoolu mpempe - gị kichin foset.
Ma ị na-asa nri, na-agbagharị mkpofu ahịhịa ma ọ bụ na-ejuputa ite iji sie mmiri nkịtị, a na-agbapụ mmiri ọkụ ma na-apụ.
N'ihi ojiji a na-ejikarị eme ihe, ị ga-achọ ịhọrọ ọkpọkọ mmiri nke nwere ike iguzosi ike na ihe ndị na-eme kwa ụbọchị.
Ikpebi na nke kacha mma Kitchen foset
Tụlee ihe ndị a mgbe ị na-ahọrọ na zụta ihe ọkpọkọ n'ịntanetị.:
Ihe iche iche
Ejiri otu aka na aka abụọ
Ekike Kitchen emecha ma mechaa
Enwere ike ịzụta ihe eji esi nri esi nri n'ọtụtụ ụzọ, ụdị na mmecha. Họrọ site na etiti-setịpụrụ, otu oghere, oghere abụọ ma ọ bụ nhazi mgbidi. Ihe eji esi nri kichin na-agbakwunye efere oche ma ọ bụ ihe ntinye iji kwado ihe eji eme ihe atọ ma ọ bụ anọ.
Ihe eji eme ihe na-agbanwe site na ezigbo levers na obe na loops na knobs, ebe ụdị aghụghọ dị iche site na akwa arc na 180 Celsius swing na ala arc na pullout spray wand. A na-enwe ọtụtụ ụdị aghụghọ dị iche iche n'etiti ọkpọkọ aka abụọ dị ka nrụgharị mgbanwe tem na-egbochi.
Foset rụchara dị ọtụtụ ma nwee ike inye kichin gị ihe ewu ewu ama ama ama. Fọdụ ihe eji ewu ewu gụnyere chromium, igwe anaghị agba nchara, ojii / ọla, nickel na ndị ọzọ. Họrọ ọkpọkọ mmiri nke akwụkwọ ikike siri ike na-akwado; ọtụtụ ndị na-emepụta ọkpọkọ ọkpọ mmiri na-eme ka ndụ mmadụ dị ogologo oge na-adịghị mma.
Ihe Pụrụ Iche: Ndị na-agba mmiri, ndị na-agba ncha / ude mmiri na sistem na-a Dụ mmiri.
Sprayers na wuru ncha / ude mmiri bụ ihe ndị a ma ama maka ọkpọkọ kichin; Enwere ike ịchọta sprayers dị ka nsị sitere na ọkpọkọ ọkpọkọ ma ọ bụ dịka akụkụ dị n'akụkụ akụkụ ahụ. Otu ihe eji etinye mmiri mmiri bụ ihe ọhụụ, ọ ga - enye ike nke mmiri nkịtị na kichin kichin.
Uru nke pọpụlị pullout gụnyere njikwa otu aka nke mmiri na mmiri, yana ụlọ nri kichin niile ha nwere ike ịnabata. Enwere ike ịzụta sprayers n'akụkụ n'otu n'otu ma wụnye ya na sink nke nwere oghere ndị ọzọ. Agbanyeghị ịnweta egwuregwu zuru oke maka ọkpọkọ mmiri dị gị nwere ike were ụfọdụ ọrụ; a na-eme ọbụna ndị ahụ na-eji pọmpụ mmiri abịa mgbe ụfọdụ site na ihe dị iche na mmiri karịa ọkpọkọ mmiri.
Enwere ike iji ọgwụ ịgba mmiri ịsa efere, saa ebe a na-asa mmiri na akwụkwọ nri dị ọcha
Sprayer tubes arụnyere iche iche nwere ike gafere 4 ′ n'ogologo kacha iru
Wuru na ncha / ude mmiri dispensers ọ bụghị nanị na-enyere belata ọgba aghara gburugburu gị igbapu, na mgbakwunye na ha dakọtara na gị foset maka a dara oké ọnụ ọbụna anya. Ekpuchiri ya nke ọma n'okpuru mpempe akwụkwọ, ọdọ mmiri ahụ nwere ike iburu ncha ma ọ bụ ude zuru oke; ụfọdụ ndị na - enye ihe ntanetị na - etinye ihe ndozi maka ịdị mma gị.
Single-aka Vs. Abụọ-eji Kitchen fosets
Ntinye na nhazi nke aka, na ịdị mfe nke ịdị iche site na ọkpọkọ mmiri na nke ọkpọ. Enwere ike itinye azụmahịa nke ọkpọkọ aka abụọ ozugbo n'akụkụ spout na nhazi etiti ma ọ bụ enwere ike ịdebe ha n'akụkụ nhazi. Site na njikwa na-enweghị ntụpọ na ntu oyi, ị nwere ike ịnweta ngbanwe ihu igwe dị mfe.
Single-ejiri fosets na-enye gị ohere ngwa ngwa na ngwa ngwa ịgbanwe mmiri aga na okpomọkụ na otu otu ihe, na-eji otu akụkụ. Ebe ọ bụ na aka anaghị achọ obere ọrụ iji rụọ ọrụ, enwere ike iji aka gị ma ọ bụ aka gị ma ọ bụrụ na aka ejide, ihe ruru unyi ma ọ bụ ncha.
Kwụsịtụ bọtịnụ (na Pullout Wand)
Fafọdụ ọkpọkọ na-enye bọtịnụ nkwụsịtụ ebe n'eziokwu, enwere ike ịkwụsịtụ mmiri na-aga nwa oge site na nsị.
Ikpo-kpo oku foset
Ngwunye-ite na-akwado mgbidi na mgbidi site na nso iji mee ka ite dị arọ jupụta na oke karịa ịjuju ha na nsị.
Nke gara aga :: Etu esi azuta ngwa nri ohuru Osote: Etu ị ga - esi ahota ezi mmiri maka bekee gị
2021 / 01 / 10 884
2020 / 12 / 21 5118
2020 / 11 / 19 4441
2020 / 11 / 19 4049
2020 / 11 / 18 4333